बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनी आउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, ‘मानार्थ महाविद्यावारिधि’ दिने तयारी – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनी आउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, ‘मानार्थ महाविद्यावारिधि’ दिने तयारी
२८ बैशाख २०७९, बुधबार ०६:४१
बुटवल । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी जेठ २ गते बुद्ध जयन्तीको अवसरमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउँदै हुनुहुन्छ । मोदीले चार वर्षपछि नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्न लाग्नुभएको हो । आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो  । ०७१ मा प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीको यो पाँचौँ भ्रमण हो भने दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘अनररी डक्टरेट’ अर्थात् मानार्थ महाविद्यावारिधिबाट सम्मानित गर्ने तयारी गरेको छ । भ्रमणका अवसरमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले महाविद्यावारिधिबाट सम्मान गर्न लागेको हो । विश्वविद्यालयको कार्यकारिणी सभाले मोदीलाई अनररी महाविद्यावारिधि दिने निर्णय गरिसकेको विश्वविद्यालय महासभाका सदस्य डा. रमेश ढुंगेलले जानकारी गराउनुभयो ।
जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी उत्तर प्रदेशको कुशीनगर हुँदै लुम्बिनी आइपुग्ने कार्यक्रम छ । लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्नुहुने छ । नेपाल सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारी पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने जनाइएको छ । लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबीच संक्षिप्त वार्ता पनि हुनेछ । मोदीले गौतम लुम्बिनी क्षेत्रमा ६ घण्टा बिताउनुहुने स्रोतले जनाएको छ ।
२५६६औँ बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउने भएपछि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा तयारी तीव्र पारिएको छ । यद्यपि, भ्रमणको औपचारिक कार्यतालिका भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
उदीयमान खेलाडीको टेबलटेनिस प्रशिक्षण